Tatoazy amin'ny kibony: torohevitra tokony hotadidina | Ny fanaovana tatoazy
ny tombokavatsa eo amin'ny kibony no anaovana azy ireo amin'ny faritra sarotra, na noho ny antony famolavolana na ny toerana tenany, maharary ary sarotra ny manao tatoazyNa dia, mazava ho azy aza, ny endrika nofinidy voafidy dia afaka mijery tsara, ary koa tsy toerana be mpitsidika indrindra noho ny fahasarotany.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia nifidy torohevitra vitsivitsy ho anao izahay tombokavatsa ao am-bohoka mety ilaina izany raha mieritreritra ny hanao tatoazy amin'ity faritra amin'ny vatana ity ianao.
1 Ny fanaintainan'ny tatoazy amin'ny kibo
2 Fiovan'ny marika sy ny fiovan'ny tatoazy
Ny fanaintainan'ny tatoazy amin'ny kibo
Ny tatoazy amin'ity faritra ity matetika dia miaraka amin'ny fanaintainana be, be dia be. Tsy dia faritra marefo indrindra izy io noho ny fahalemen'ny volony, fa koa mampijaly indrindra amin'ny foitra na eo am-piandohan'ny fahaverezan'ny anarany ny vavony ...
Ankoatra izany, ny lanjanao dia mety hisy fiatraikany amin'ny fanaintainana hitanao amin'ity faritra ity bebe kokoa. Arakaraky ny hamaroan'ny fonao no maharary azy, satria ny hoditra tsy ho malama amin'ny faritra toy ny an'ny olona mahia.
Fiovan'ny marika sy ny fiovan'ny tatoazy
Ny tatoazy eo amin'ny kibony dia hita ihany koa amin'ny faritra iray izay tena mora very endrika rehefa mandeha ny fotoana., rehefa mihabe na mihena isika. Iray amin'ireo antony tokony hijerena azy io na dia eo aza ny tatoazy tsy very endrika tanteraka, ny fahasamihafana dia azo jerena amin'ny endrika sarotra kokoa.
Noho izany antony izany zava-dehibe ny fieritreretanao tanteraka ny toerana hametrahanao ny volavolanao amin'ny farany.
Manantena izahay fa ireto torohevitra roa ireto momba ny tombokavatsa momba ny kibo dia nahasoa anao. Lazao aminay, manana tombokavatsa amin'ity fomba ity ve ianao? Nanao ahoana ny zavatra niainanao? Aza adino fa azonao atao ny milaza aminay ny zavatra tadiavinao, raha te hanao izany, mila mamela hevitra fotsiny izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny kibony: torohevitra tokony hotadidina
Tatoazy Fishhook, inona no dikan'izy ireo?
Nanazava ny tatoazy Coyote sy ny dikany